Dhagayso: Isbaarooyinka Shabeelaha hoose oo la wada qaaday iyo Dowladda oo sheegtay in Burcadda ay dumarka kufsan jireen. – idalenews.com
Dhagayso: Isbaarooyinka Shabeelaha hoose oo la wada qaaday iyo Dowladda oo sheegtay in Burcadda ay dumarka kufsan jireen.
Gobolka Shabeelaha Hoose oo ka mid ahaa Gobollada ugu isbaarada badan ayaa waxaa lagu guuleestay in la qaaqo inta badan isbaarooyinkaasi.
Guoomiyaha Degmada Wanlawayn ayaa sheegay in degmadiisa laga qaaday dhamaan isbaarooyinkii yaalay sidoo kalana waxa uu sheegay in Burcadda isbaarada dhigan jirtay ay dhibaato ugaysan jireen Shacabka ku safra Gobolka.
Waxa uu gudoomiyaha ka dhawaajiyay Dhaca rakaaba ka sukoow in Ragga saran gawaarida loo gaysan jiray Jirdil Halka Dumarkana la Kufsan jiray, balse qaylo dhaan maamullada Degmooyinka Gobolka Shabeelaha hoose ay sameeyeen lagu guuleestay in la qaado isbaarooyinkaasi Burcaddiina lakala Eryay.
Hadaba Wariyaheena Cumar Laki Man oo ku sugan Xafiiska Kismaayo24 ee Boosaaso ayaa warbixintaan ka diyaariyay isbaarooyinka qaabka loo qaaday isagoona Waraysi arintaasi kala yeeshay Gudoomiyaha Degmada Wanla-Wayn Isaaq Caliyow.
Halkaan ka dhagayso Warbixinta Cumar Laki Man+Waraysiga Gudoomiyaha Wanla-Way.
Muslimiin badan oo laga daad guriiyay Jamhuuriyada Afrika Dhaxe.
Daawo:Amin Arts oo soo bandhigay Sawir-gacmeed aad loo hadal hayo.